ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်. Show all posts
LINE Free Calls & Messages ဆိုရင် ပြောစရာတောင် မလိုလောက် တော့ဖူးလို့ ထင်ပါတယ် ဒီနေ့ ထွက်ထား တာလေးပါ သတိရလို့ တင်ပေး လိုက်တာပါ။ Free Calls တွေမှာ တော့ Viber ပြီးရင် ဒီကောင် လေးကို အကြိုက်ဆုံး ပဲဗျာ။ Video Call ဆိုရင် Screen အပြည့် မြင်ရပြီး ရုပ်သံ ထွက် တအား ကြည်လင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကောင်းလေး ကတော့ Android OS အားလုံး သုံးနိုင်ပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်လေး ကတော့ 23.4MB ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
ကဏ္ဍ Android, Messenger, Phone Application, ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်
Viber v5.2.0.2415 Update
-viber update ထွက်​လာလို့ တင်​​ပေး လိုက်​ပါတယ်​။ play store ဝင်​ရန်​ အဆင်​ မ​ပြေပါက ​အောက်​ကလင့်​မှာ​
Apk file size 31MB ရှိပြီး -Android OS Version2.3 နှင့်​ အထက်​ရှိတဲ့ ဖုန်းများ​ပေါ်မှာ ထည့်​သွင်း ​​၍ အသုံးပြု
မိမိတို့ရဲ့ viber ကို update မတင် ရသေးသူများ အောက်မှာ download ပြီး update တင်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာသမားတွေ အတွက် Viber ရဲ့ မူရင်းဆိုဒ် လင်ပါတင်ပေး ထားပါတယ်။
▼ shared.com ▼ OR ▼ viber.com ▼ OR ▼ Play Store ▼
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, viber, ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်
Activated လုပ်စရာမလိုပဲ အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ TeamViewer 9.0.32494
TeamViewer ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး သိကြမှာပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ၊ဆော့ဝဲ
ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မသိသေးသူများ အတွက် ရှင်းပြပါမယ်။ TeamViewer က ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့ စက် တခုခု
ဖြစ်လို့ ကိုယ်က ပြန် မပြင်တတ်ဘူး ဆိုပါတော့။ အဲဒီလို ဆိုရင် အဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကူညီ
တောင်းပြီးဝင်ပြင် ခိုင်းလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။
အင်တာနက် လိုင်း ရှိရုံနဲ့ မိမိ ကွန်ပျူတာကနေ တခြား ကွန်ပျူတာကို ဝင်ကြည့် လို့ ရပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကို
install လုပ်ပြီးတာ နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ You ID နှင့် Password ပြနေပါလိမ့်မည်။ မိမိပေးဝင်ချင်သည့် သူငယ်ချင်းကို
ကိုယ်ရဲ့ID နှင့် Password ပေးလိုက်ရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို သူငယ်ချင်းက ၀င်ပြင်ပေးနိုင် မှာဖြစ်ပါ တယ်။
ဆော့ဝဲလ် ကို Activated လုပ်စရာမလိုပဲ Free License အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ Free License ဖြစ်အောင် Install နည်းကို ပုံနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါ။
ပုံမှာတွေ့တဲ့ အတိုင်း How do you want procesed ? အောက်မှာ Basic installing ကို အစက်ပေးပြီး အဲဒီ
အောက်မှာ How do you want to use TeamViewer? ရဲ့ အောက်မှာ Personal / Non-commeral use ကို
အစက်ပေး ပြီး Accept-finish ကို သွားပြီး ဆက်လက် Install လို့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် Free License အဖြစ် အ
ချိန်ကန့်သတ် မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, October 30, 2014 No comments:
အင်တာနက် မလို ဖုန်းပိုက်ဆံ မကုန်တဲ့ Wi-Fi Talkie Lite
အားလုံး စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဒီဆော့ဝဲလေးက တော်တော် ကောင်းပါတယ် ဖုန်းပိုက်ဆံလည်း မကုန်
အင်တာနက်လည်း မလိုဘဲ ဖုန်းခေါ်နိုင်တယ် မက်ဆေ့ ပို့နိုင်တယ် ဒီဆော့ဝဲလေးကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိထားရပါ
မယ် Zapya နဲ တူတူပါဘဲ Zapya သုံးတတ်ရင် လွယ်ပါတယ် ။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် Wi-Fi Hotspot ရယူရမှာဖြစ် ပါတယ် ဖုန်းအများကြီး နဲ့လည်း ချိတ်ဆက် မက်ဆေ့ ပို့ ဖုန်းပြောနိုင်ပါ
တယ် ဆော့ဝဲထဲ မှာ Wi-Fi Hotspot ဆိုတာ ရှိပါ တယ် Wi-Fi Hotspot နဲ ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းတွေ အများကြီးနဲ့ အ
လျင်မြန်မူ ရှိပါတယ် ဆော့ဝဲထဲ ကနေ အသုံးပြု ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ ဘဲဖြစ်
ဖြစ် ဖုန်းပြော မက်ဆေ့ပို့ နိုငိပါတယ် Wi-Fi ရရှိတဲ့ အကွာ အဝေးလောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် နမူနာ ပုံတွေပြထားပါတယ် ။
— The voice communication between any numbers of smartphones.
Note: If you have some problems with voice communication quality:
— Try to turn on “Keep screen on” in the application preferences.
— (For HTC smartphones only) Try to turn on “Best Wi-Fi performance” in the advanced system Wi-Fi settings (Settings -> Wireless & networks -> Wi-Fi settings -> Advanced).
ကဏ္ဍ Android, Connection, Phone Application, ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်
WhatsApp Messenger+ v6.24D Patched Apk
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင် သူများ အတွက် ကတော့ မိသားစုများနှင့် နိုင်ငံတွေ ဝေးကွာနေပြီး တစ်ယောက်နှင့်
တစ်ယောက် စကားပြော မယ်ဆိုရင် ဒီကောင်းလေး ကတော့ viber, line andfacebook လိုမဟုတ်ဘူး လိုင်း
နည်းနည်းရှိတာနဲ့ တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်ထံသို့ အမြန်ဆုံး Massage တစ်ခုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ချစ်စရာကောင်းလောက်တဲ့ Sticker များစွာ ပါဝင်လာပြီး Message box တွင် လည်း ပြုပြင်
1) First backup your conversations by pressing OPTION button Go to Settings>Chat settings>Backup Conversations
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်
TeamViewer 9.0.32494 Enterprise + Portable Full Crack Version
ကဏ္ဍ Connection, Portable, ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်
Viber For iOS မြန်မာ ဗားရှင်း ထွက်ပြီ
PC, Internet, Phone စတဲ့ အိုင်တီနဲ့ ပတ်သက်တာ မှန်သမျှ ကျနော်တို့ မြန်မာစာနဲ့ ထွက်လာတယ်ဆို တာ
တော်တော်လေးကို ရှားပါသေးတယ်။ နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်စာပေနဲ့ အရာရာတိုင်းကို ရှိ
ကမ္ဘာမှာ ဘယ်ဘာသာစကားကို အဓိကသုံးစွဲရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် မရှိပေမယ့် အင်အားကြီးတဲ့ ဘာသာ
စကားကို သုံးနေကြတာအထင်အရှားပါ။ ကျနော်လဲ လူထဲကလူတစ်ယောက်မို့ ကျနော်တို့ မြန်မာစာ မြန်မာ
စကားကို နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဖုန်း အလကားခေါ်ဆိုလို့ လွယ်ကူတဲ့ စမတ်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Viber Application ကို
မြန်မာမှု ပြုလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား လုပ်ထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာများနဲ့ ရင်းနှီးနေပြီးသား သူများအတွက် ကြည့်ရတာ မျက်စိ နောက်ကောင်း နောက်ပေမဲ့
မြန်မာ လူမျိုးများ အတွက် သင့်တော်မယ် ထင်လို့ မြန်မာ ဗားရှင်းလေးကို လုပ်ဖြစ် သွားတာပါ။ အနှောက် ယှက်ဖြစ်ရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကို Language Data အခက် အခဲကြောင့် မြန်မာလို မပြန်
ဘဲ ဒီအတိုင်းထား ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ အတွက်လဲ ထပ်ပြီး တောင်းပန်ပါရစေ နောက် ထွက်မည့် ဗားရှင်း အ သစ် တွေမှာ ကောင်း သထက် ကောင်းအောင် ကျိုးစားပါ့မယ်။ အခု ထွက်လာတဲ့ Viber မြန်မာဗားရှင်းက
နောက်ဆုံး ထွက် ဗားရှင်း ဖြစ်ပြီး iPhone Jailbreak လုပ်ပြီးသား မြန်မာဖောင့် ရှိမှသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်
Jailbreak မလုပ် ရသေးတဲ့ ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုလို့ မရနိုင်သေး ပါဘူး။ သုံးရင်လဲ မြန်မာဖောင့်က အတုံး တုံးလေးတွေပဲ ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကောင်းမယ် အသုံးများမယ်ထင်တဲ့ Application များ
ကို မြန်မာမှုပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
တစ်ခုခု အမှားအယွင်း တွေ့ရှိလျင် ကျနော့် လိုအပ်ချက်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ ကျနော် လုပ်ထားတဲ့ Viber မြန်
မာ ဗားရှင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖေ၀န် အကြံပြုချက်များကို လက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Viber မြန်မာဗားရှင်း ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အကူညီပေးခဲ့တဲ့အကို ကိုဧချမ်း (US) ဒီနေရာကနေအထူးပဲ ကျေး
ဇူး တင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေ….။
pCloud Mediafire Ziddu
ကဏ္ဍ iPhone, Phone Application, ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်
Android ဖုန်းအတွက်​ viber တစ်​ခု ထဲမှာ အ​ကောင့်​​တွေ အများကြီး ထည့်​ သုံးလို့ရ ​စေမယ့်​ "2Line for viber
ကို တင် ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
တစ်​ခု ရှိတာ က ဒီ apk ​တွေကို အသုံးပြုမယ့်​ ဖုန်းဟာ Rooted Access ရရှိ ထားဖို့ လိုမှာ ဖြစ်​ပြီး Android
version 2.2 နှင့်​ အထက်​ လည်း ရှိထားရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
Playstore Link: 2Lines for Viber ★ ROOT
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, July 03, 2014 1 comment:
GrooVe IP - Free Calls v2.0.2 for android
ဒီ Application လေးကို ထည့်သွင်းထားခြင်း အားဖြင့် USA and CANADA မှာ ရှိတဲ့ မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ
ထံသို့ Free Call-(free unlimited calls) ခေါ်ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Android ဖုန်းတိုင်းတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်ခင်ဗျား။ Application လေးကို သွင်းပြီးလုဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါ Google Voice Account အတွက် မိမိရဲ့ Gmail နဲ့ Sign-in လုပ်ပေး လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ည။
အကယ်၍ တဖက်က မိမိမိတ်ဆွေမှ မိမိထံသို့ ပြန်ခေါ်ခဲ့သည် ရှိသော် မိမိက Google Voice Account ကိုဖွင့်ပြီး
တော့ Forware Call to Google Chat နဲ့ လက်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ည။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ GrooVe IP က
တစ်မိနစ်ကို 1.2Mb-့Bandwith နဲ့ အလုပ် လုပ်တာ ဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်တော်လဲ မသုံးရ သေးတော့ သေချာ မစမ်းရ
စမ်းပြီးပါက သေချာစွာပြန်လည် ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျား။ Wifi or Mobile Data ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ connection
နဲ့ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ကိုတော့ Android 2.1 အထက်ကို သုံးနိုင် ပါတယ်။
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Free Call ခေါ်ဆို နိုင်သော အကောင်းဆုံး Application (၁၀) ခု
အင်တာနက် အသုံးပြု နေတဲ့ မိုဘိုင်း users အများစု ဟာ သာမန် ဖုန်းခေါ်ဆို မှုကနေ ငွေကြေးကုန်ကျ မှု
တွေ ရှိနေတာကို မလိုလား တတ် ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် Users အများစုရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့် ဆည်း ပေး
မယ့် Free Call & Free Message application အများ အပြားလည်း ပေါ်ထွက် လာပါတယ်။
ဆော့ဝဲ များ ထွက်ရှိ လာပေမယ့် users တွေကတော့ သူတို့နဲ့ အသုံး တည့်မယ့် Free Call application
လေးများကိုပဲ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ ဆောင်ထားပြီး အသုံးပြု ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ် Free Call & Text ဆော့ဝဲတွေက ဘယ်လိုကောင်းလဲ ဆိုတာ သိထား သင့်ပါတယ်။
အခုပြောပြချင် တာကတော့ Android ဖုန်းပေါ်မှာ Free Call ခေါ်ဆိုနိုင်သော Free ရယူနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ အရပ်
ရပ်က users အများအပြား အသုံးပြု နေကြတဲ့ အကောင်းဆုံး Application (၁၀) ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Messenger ဟာ ဟိုး အရင် တုန်းက facebook friend အချင်းချင်း စာပို့ ပြောဆိုရုံသာ ရခဲ့
ပါတယ်။ မကြာသေး ခင်က Facebook ဟာ ၄င်းရဲ့ Facebook Messenger service ကနေ တစ် ဆင့်
Facebook Messenger သွင်း ထားတဲ့ users အချင်း ချင်း free call ခေါ်ဆို နိုင်မယ့် service ကိုထည့်
သွင်းပေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါ Facebook Messsenger ကနေတစ်ဆင့် Facebook friend အချင်းချင်း စာပို့ခြင်း ၊ sticker ပို့
နိုင်ခြင်း ၊ ဖိုင်ပိုနိုင်ခြင်း ၊ Free Call ပြောဆို နိင်ခြင်း စတဲ့ Service များကို ရရှိနေ ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Messenger ကို အောက်က link ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
kakao Talk ဟာလည်း လူသုံးများတဲ့ Free Call & Texts Messaging ဆော့ဝဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
KakaoTalk ဆော့ဝဲ သွင်းထားသူ အချင်းချင်း Free Call ပြောဆိုနိင် ၊ Free Text Message ပို့နိုင်မှာ ဖြစ်
ပါတယ်။ KakaoTalk ဆော့ဝဲရဲ့ ထူးခြားချက် ကတော့ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့ သာမက လူ အများကြီး
အုပ်စုဖွဲ့ ပြောဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ Free Call ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
KakaoTalk application ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Line ဆော့ဝဲဟာလည်း လူသုံးများတဲ့ Free Call & Message ဆော့ဝဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ
အရပ်ရပ်က users ပေါင်း သန်း၄၀၀ ခန့် အသုံးပြုနေ ကြတဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Line app သွင်းထားသူ အချင်းချင်း FreeCall & Free Text ပေးပို့ပြောဆို နိုင်မှာပါ။ Line ဟာ
လည်း တစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့ သာမက လူအများကြီးနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း Voice Call ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
Line application ကိုတော့ အောက်က link ကနေရယူပါ။
magic App လို့ခေါ်တဲ့ Free Call ဆော့ဝဲလေး ဟာလည်း ထူးခြား ပါတယ်။ သူကတော့ အရမ်း လူသုံး
များတဲ့ စာရင်းထဲမှာ မပါ ပါဘူး။ နိင်ငံ ကန့်သတ်ချက် လည်း ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ အမေရိကန် (သို့) က
နေဒါမှာ နေထိုင်သူ ဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲကို အသုံးပြု ပြီး free call ပြောဆို နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး တခြား နိုင်ငံ တွေ
မှာနေထိုင်သူ ဆိုရင်တော့ ဒီဆော့ဝဲကို အသုံးပြုဖို့ လစဉ်ကြေး ပေးဆောင် ရပါတယ်။
သူ သတ်မှတ် ထားတဲ့ နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဆိုရင် နိုင်ငံ ထဲက ဘယ်ဖုန်းကို မဆို free call ခေါ်နိုင် ပါတယ်။
Magic App ကိုအောက်က link ကနေ ရယူနိင် ပါတယ်။
Nimbuzz Messenger ဟာလည်း ထွက်ရှိတာ ကြာပြီဖြစ်ပြီး လူသုံးများတဲ့ Free Call & Text app
တစ်ခုပါပဲ။ သူ့မှာ ပါတဲ့ features တွေကလည်း အခြား လူသုံးများတဲ့ Free Call app တွေလိုပါပဲ။
Sticker ပို့ခြင်း ၊ group chat ပြောဆိုခြင်း ၊ TextChat နဲ့ FreeCall ပြောဆိုခြင်း စတဲ့ အချက်တွေ ပါ
၀င်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ HD Voice Calling စနစ် ပါတဲ့ အတွက် Free Call ပြောဆိုတဲ့
အခါ တခြား ဆော့ဝဲ တွေထက် အသံပိုကြည် ပါတယ်။
Nimbuzz app ကိုအောက်က link ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
Skype ဟာလည်း လူသုံး အများဆုံး Free Call ဆော့ဝဲ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Video Call နဲ့ ပတ်သက်
လာရင် Skype ကိုမှီတဲ့ application မရှိသေးဘူးလို့ တောင်တင်စား နိုင်ပါတယ်။ Skype ဟာ Skype
အသုံးပြုသူချင်း Free voice call , Free video , Free Text Chat စတာတွေပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပ ဖုန်းနံပါတ်များ ကိုလည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ယင်းသို့ ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ် လိုပါက ငွေကြေး
အနည်းငယ်သာ ကုန်ကျမှု ရှိပါတယ်။
Skype app ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Tangon ဟာလည်း ဒီ application စတင် ထုတ်လိုက် ကတည်းက လူသုံး များခဲ့တဲ့ ဆော့ဝဲ တစ်ခု ဖြစ်
ပြီး အခုချိန် ထိလည်း လူသုံးများ နေဆဲပါပဲ။ Tango ကိုအသုံးပြု ပြီး Tango အသုံးပြု သူချင်း Free Call
& Free Text ပြောဆိုနိင်ပြီး Free Video Call လည်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
Tango ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ သူ့မှာ Built-in game တွေပါရှိပြီး Tango အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ ဂိမ်း
အသစ်တွေ လည်း ရယူနိုင် ပါသေးတယ်။ Tango သုံးရင် ပျင်းနေရင် ဂိမ်းဆော့နိုင်တာပေါ့။
Tango app ကိုအောက်က link ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
Viber ကတော့ လူသုံးအများဆုံး Free Call & Text Messaging ဆော့ဝဲဖြစ် ပြီး အထူး ညွှန်းဆို
ပြော စရာတောင် မလိုပါဘူး ။ Free Call & Free Text ပြောဆိုနိုင်ခြင်း ၊ group chat ပြောဆို
နိင်ခြင်း ၊ stiker ပေးပို့နိုင်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ Viber အသုံးပြု သူချင်း သာမက ကမ္ဘာ
အရပ်ရပ်က အပြင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုခေါ်ဆိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Viber Out လို့ခေါ်တဲ့ feature ပါ
ရှိပြီး ဒီ feature ကို အသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ထည့်သွင်း ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Viber ဆော့ဝဲကိုအောက်က Link မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Whatsapp ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံး အများဆုံး Messenger app ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကနေ
တောင် ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလျံပေးဝယ်ထားရတဲ့ Product တစ်ခုပါ။
ဒီဆော့ဝဲကို အသုံးပြု ပြီး Texxt Message , Photo , Video Message စတာတွေပေးပို့နိင်ပါတယ်။
Group Chat ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ Whatsapp ကို အသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ် အခမဲ့ အသုံးပြု
ခွင့် ရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်တွေ မှာတော့ တစ်နှစ်ကို ၁ ဒေါ်လာပေးရမှာပါ။
Whatsapp Messager ကိုအောက်က link ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
WeChat ဟာ လူပေါင်း သန်း ၃၀၀ ကျော်ခန့် အသုံးပြုနေ ကြတဲ့ နာမည်ကြီး Free Call &
Message app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ WeChat ကိုအသုံးပြု ပြီး Free Call ,Free Message , Sticker
သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက် ကတော့ Facebook လိုပဲ ကိုယ်ပိုင် wall တစ်ခု ပါရှိပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ၊
activities တွေကို တင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ အနီး အနားမှာ ရှိနေတဲ့ WeChat users တွေကို ရှာဖွေ ချိတ်ဆက် နိုင်ပါတယ်။ နောက်
ထူးခြားချက် ကတော့ ဖုန်းအနေနဲ့ မပြောချင် သူတွေ အတွက် ဝေါ်ကီတော်ကီ function ပါခြင်း
ဟိုဘက်က ခလုတ်နှိပ်ပြောလိုက် ၊ ဒီဘက်က နားထောင်လိုက် ၊ ဒီဘက်က ခလုတ်နှိပ်ပြောလိုက်
WeChat app ကိုအောက်က link ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အသုံး အများဆုံး Free Call & Text ဆော့ဝဲတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်မယ့်ဆော့ဝဲကို ရွေးချယ် အသုံးပြုနိင် ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, May 16, 2014 No comments: